ब्लग - साहित्य/ सुस्वास्थ्य
डा. ओम मुर्ति अनिल - Jan 17 2019
- Sep 26 2018
ह्दयाघातका धेरै कारणहरु हुन्छन । ती मध्ये प्रमुख १० कारणहरु तल तस्विरमा देखाइएका हुन् । त्यसमध्ये धुम्रपानको सेवन र उच्च कोलेस्ट्रोल सबभन्दा प्रमुख २ कारणहरु हुन् । नेपाल लगायत संसारका ५० भन्दा बढी देशहरुमा गरिएको एउटा रोचक अध्ययन (INTERHEART) को अनुसार यी दुई कारणहरु सबभन्दा बढी खतरनाक भएको पाइएको छ ।
डा. अोम मूर्ति अनिल - Aug 31 2018
मुड बुस्टर फल केरा
यो फललाई यत्तिकै सेवन गर्न सकिँछ, सर्वत बनाएर वा स्याण्डविचमा पनि यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अरु फलपूmलहरुमा मिसाएर पनि केराको सेवन बढाउन सकिन्छ । बजारमा पाइने महँगो स्पोर्टस् ड्रिकंस्हरुभन्दा केरा प्राकृतिक रुपमा धेरै पैसा खर्चै नगरी पाइने फल हो केरा ।
गर्मी महिनामा पाइने सिजनल तरकारी लौकाका फाइदाहरुबारे हामी सायद अनभिज्ञ नै छौँ होला । के हुन सक्छन् यसका फाइदाहरु ? जानौँ है त ।
योगाबाट परिवर्तन ल्याउनुहोस्
पुरानो समयमा, योगीहरुले मात्र ध्यान गर्दथे त्यो पनि एक्लै मात्र गर्थे । अहिले आम मानिसहरुले पनि योगा गर्दछन् र सकभर समूहमा गर्ने गर्छन् । उसबेला योगा भनेको ध्यान र प्रणायम मात्र हुने गर्दथ्यो तर आजकल योगालाई प्राय आसनसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ ।
- Apr 28 2018
समूहले गरेको अनुसन्धानमा ५० जना दिनहुँ ध्यान गर्ने मानिस र ५० जना ध्यान नगर्ने मानिस छानेर परिक्षण गरेका थिए । सो अध्ययनमा ध्यान नगर्ने मानिसको भन्दा ध्यान गर्ने मानिसहरुको मस्तिष्कको वजन धेरै रहेको पत्ता लगाएका थिए ।
स्वस्थ शरीरको लागि आयुर्वेद
खासमा यी जडिबुटिहरु के हुन् र यसले कसरी हामीलाई फाइदा गर्छ त ? जडिबुटि भन्नेबित्तिकै सधैँ हामीले मुख बिगारेर खानुपर्ने तीतो औषधि भनेर बुझ्न पर्दैन । साधारणतय हाम्रै भान्सामा पाइने अदुवा, बेसार, दालचिनी, मह, आदि पनि जडिबुटि नै हुन् । हामीले गर्नुपर्ने एक मात्र काम भनेको यसको प्रयोग जानेर र धेरै मात्रामा गर्नु हो ।
मुखमा राख्दा नै चर्रर गर्ने यो मसलाले फाइदा भने गजबकै गर्दछ । यसले शरीरभित्रको फोहोर निकाल्न, किटाणुविरुद्ध लड्न, घाउहरुबाट जोगाउन, भाइरसँग लड्न, दुखाई कम गर्न, पेटभित्रको हावाबाट मुक्ति दिनजस्ता अनेक फाइदाहरु प्रदान गर्न सक्छ । देख्दा मसिना दाना र गन्ध नमिठो लाग्ने भएपनि यसको शक्तिलाई कम भने नआकौँ ।
- Mar 15 2018
रगत शुद्धिकरणका लागि फाइदाजनक पाँच वटा खानेकुराहरु
बिरामी नभई अस्पताल नपुग्ने हामी नेपालीले खानेकुराहरुमा अझ बढी ध्यान पु¥याउनपर्छ । शरीरका सबै अंग उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने भएपनि शरीरमा रगत नभई हामीलाई चाहिने पोषण तथा शक्ति सञ्चार हुँदैन । रगतले राम्ररी काम गर्दा मात्र पनि हामी धेरै रोगबाट बच्न सक्छौँ । आज हामी रगत सफा कसरी राख्ने भन्नेबारे जानौँ ।
- Jan 27 2018
वायू प्रदुशनको सूचीमा नेपाल
यि सबै कुराहरुले अनि तथ्यहरुले नेपालीको स्वास्थ, जिवनस्तर अनि औसत आयूमा प्रष्ट प्रभाव पार्दछ । यि सबै कुराहरुको दिर्घकालिन अनि पुस्तौंपुस्ता असर रहन्छ । हामी प्रदेशको राजधानी कहाँ हुन्छ भनेर एकअर्कासंग विवाद अनि चक्काजाम र हड्ताल गर्दै हिँड्दा कतै हामीले स्वास्थ जस्तो गम्भीर कुरामा ध्यान दिन छुटाएका त छैनौं ? संघीय गणतान्त्रीक नेपालमा श्वास फेर्ने हावा, उव्जाउने माटो अनि हरिया रुखहरु नै नरहने हो भने यहाँ गणतन्त्र र स्वाभीमान मात्रको कुनै अर्थ रहने छैन् । नेपाली जनस्वास्थ बिध अनि समबन्धीत निकायहरु लगायत हामी सबैजना सजग रहन जरुरी छ । स्वास्थ धनम सर्वप्रधानम ।
- Jan 21 2018
दाँत चम्काउने घरेलु उपायहरु
आज हामी केही अत्यन्त सरल घरेलु उपायहरु बताउन जाँदैछौ जसले सहजै हाम्रा दाँतका दागहरुलाई हटाइदिन्छ । धुम्रपान, खैनी लगायत अत्याधिक चिनी भएका खानेकुरा र पेय पदार्थ धेरै सेवन लगायत अन्य बिभिन्न दाँतको स्वस्थ सम्बन्धीत कुरामा हेलचेक्राई गर्दा हाम्रो ओरल स्वास्थ अनि दाँत स्वंमा धेरै नराम्रो असर परिरहेको हुन्छ । मुख्य नकारात्मक असर हो, दाँतमा दाग बस्नु या चम्कीलो नभई धमिलो अनि दाग लागेको फोहोरी देखिनु ।
- Jan 17 2018
- Jan 07 2018
यस हिँउदमा टन्न गाँजर खानुहोस्
अब यस लेखको आशय भने तपाँईको खानामा काँचो अनि पाकेको दुबै रुपमा गाँजरको उपस्थिती जनाउन हो, स्मरण रहोस् काँचो र पाकेको गाँजरको आआफ्नै स्वास्थ बिशेषताहरु हुन्छन् । पकाएको गाँजरमा केही पानीमा घुलनशील भिटामीनहरु र मीनरलहरु कम हुनसक्दछन् तर अर्कोतर्फ गाँजरलाई थोरै तेल हालेर पकाउन सल्लाह दिइन्छ । यसो गर्दा एन्टीअक्सीडेन्ट सहजै उपलब्ध हुने र बेटाकेरोटीन शरीरलाई शोषण गर्न सहज हुने बिज्ञहरुले बताएका छन् ।
कालो भन्नाले फिक्का, भुलुक्क उमालेको पानीमा चियापत्ति अनि चिनी हालेर बनाइएको चिया अनि सेतो भन्नाले दुध हालेर बनाइएको चिया । जिब्रो अनुसार फरक हुन्छ स्वाद, कसैलाई कालो चियामा आनन्द लाग्छ भने कोहीलाई सेतो चिया नखाइकन चियाको धीत नै नमर्ने हुन्छ । चियाको यो दुबिधालाई आखिर स्वास्थ अनि अध्ययनहरुले के भन्छन् त ?
- Jan 03 2018
बढ्दो शहरीकरण, अराजक खानपान अनि व्यायामको कमीले अधिकांश नेपाली भूँडीहरु पुटुक्क निस्कने अर्थात सेन्ट्रल अबिसीटीको शिकार भएका छन् । यी सबैकुराहरु यस बर्ष मनन गर्दै थोरै स्वास्थमा पनि ध्यान दिने कि ?
स्वास्थमा नराम्रो असर गर्ने केही फार्मेसी ओखतीहरु
नाम नबताउने शर्तमा एक जना नेपाली डाक्टरले हामीलाई यो जानकारी उपलब्ध गराउनुभएको हो । ओखतीको उचित र सही प्रयोग हाम्रो स्वास्थका लागि बरदान हो नत्र अभिशाप । यो जानकारी शेयर गरेर कृपया धेरै भन्दा धेरैलाई जोखिमबाट बचाउनुहोला ।
डा कमल शर्मा लम्साल - Dec 25 2017
सामान्यतः उच्च रक्तचाप जस्तै धेरै कम रक्तचाप पनि स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ। माथिको सिस्टोलिक रक्तचाप ९० भन्दा कम हुनु हुँदैन। कोही व्यक्तिको रक्तचाप पहिल्यैदेखि कम हुन सक्ने र त्यति कम हुँदा केही अप्ठ्यारो नपर्ने पनि हुन सक्छ। केही शंका लागेमा चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ।
जाडोका ५ मन्त्रहरु
कि त रुई या भनौ कपडाहरु यदि त्यो नभए फुई अर्थात आगो र यदि ति दुबै भनए दुई अर्थात दुईजना हुनपर्ने भनेर पुराना नेपाली उखानहरु ले जाडो छिचोल्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन् । अब हामी भने यस उखान अनुरुप कुरा गर्दैनौ, बिशुद्ध व्यक्तिगत जीवनमा कसरी आफू अनि आफ्ना परिवारहरुलाई जाडो बाट जोगाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरु लाई ५ वटा तथ्यहरु बनाएर प्रस्तुत गर्दैछौं । यि तथ्यहरु हामीले बिश्वप्रसिद्ध न्यूयोर्क टाईम्स पत्रिकाको संस्करण बाट साभार गरेका छौं ।
डा सुबास भट्टराई - Oct 10 2017
जन्डिसबारे ९ प्रश्नका उत्तर
जन्डिसका लक्षण छन् र रगतमा पनि बिलिरुबिन उच्च छ कि छैन; यो बुझ्नु जरुरी छ। जन्डिसका लक्षण नहुँदा पनि बिलिरुबिन केही उच्च रहिरहन सक्छ। एलएफटी जाँचमा रगतको बिलिरुबिनसँगै एएलटी/एएसटी (एसजिपिटी/एसजीओटी) भन्ने जाँच पनि हुन्छ। यो सामान्य छ भने आतिनुपर्दैन।
प्रा डा अर्जुनदेव भट्ट - Oct 05 2017
प्रोस्टेट, मुत्र समस्या, लक्षण र उपचार
मुत्रनलीको सुरुको भाग सबैतिरबाट प्रोस्टेट ग्रन्थीले घेरेको हुनाले मुत्र निकासमा समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ। युवा अवस्थामा ग्रन्थीको संक्रमण भए प्रोस्टेट सुन्निएर मुत्रनलीको सुरुको भाग साँगुरिन्छ र पिसाब रोकिन सक्छ, तर यो अस्थायी समस्या हुन्छ।
'दशैंमा रक्सी र सितन' रमाईलो हैन स्वास्थलाई खतरा !!
हाम्रो तिर भनें मासुका विभिन्न परिकारलार्इ सितनको रूपमा रक्सी खाने चलन ले गर्दा ज्यानमा इन्डोटक्सीन को श्रृजना गर्दछ । यसले गर्दा सबैभन्दा असर हाम्रो कलेजो लाई गर्दछ, त्यसै कारणले गर्दा पनि नेपाली हरुमा सामान्यतया फ्याटी लिभर को समस्या धेरै देखिन थालेको छ ।
डा आनन्दकुमार शर्मा - Sep 04 2017
आँखा महत्वपूर्ण र संवेदनशील अंग हो। आँखाको हेरचाहा र सरसफाइमा अलिकति पनि लापरबाही हुने बित्तिकै विभिन्न किसिमका समस्या देखा पर्छन्। सुरुसुरुमा सामान्य त हो नि भनेर समयमै उपचार नगर्दा पछि जटिल समस्या निम्तिन्छ। आँखाका विभिन्न समस्यामध्ये एउटा हो, ‘स्टाइ’ अर्थात् बोलिचालीको भाषामा ‘आनो’, जुन ‘स्टेफिलोकोकस ब्याक्टेरिया’को संक्रमणका कारण हुन्छ।
- Aug 21 2017
जोर्नी खिइने समस्या : ५ लक्षण र उपचार
उमेर पाको हुँदै जाँदा स्वाभाविक रुपमा हामीलाई हाडजोर्नी सम्बन्धी समस्याले बढी सताएको पाइन्छ । ‘अस्टिओ आर्थाइटिस’ भनिने यो समस्यालाई नेपालीमा जोर्नी खिइनु भनिन्छ । यो समस्या विशेषगरी महिनावारी बन्द भएका महिलामा देखा पर्छ।
"पानी सफा देखिँदैमा शुद्ध हुँदैन", पानी शुद्धिकरण उपायहरु
यसपालाको बर्खाले सबैलाई रुल्लटुल्ल बनायो, बाढीपहिरोको प्रकोप अत्यन्त धरै भयो । बादलहरु पागल भएजस्तो भान हुन्छ जब बर्खाले थामिने नामै लिँदैन । के खहरे, के पहरे अनि के दोभान, त्रिवेणी र सप्तसती खोलाहरु, सबै तिर पानीको बहाव ज्यादै छ । पानी छताछुल्ल छ अनि छताछुल्ल छ नेपाली भुभाग । मृतकहरुको चिरशान्तिको कामना अनि शोकसन्तप्त परिवारलाई धैर्यधारण गर्ने क्षमता होस् ।
- Aug 09 2017
नेपालमा पनि स्वाइन फ्लू को संक्रमण, रोकथाम अनि चर्चा परिचर्चाहरु धेरै भइरहेका छन् र बिगतका केही दिनमा यसका संक्रमणले मृत्यू नै भएको तथ्य पनि आएको छ । स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएन्जा भाइरसले गर्दा हुने एउटा श्वासप्रश्वासजन्य संक्रमण हो, अप्रिल महिना सन् २००९ मा मेक्सििकोमा प्रथम पटक यो संक्रमण देखिएको हो ।
Suyog Dhakal - Aug 07 2017
सन् १९९२ देखि अगस्त महिनाको प्रथम हप्तालाई बिश्वभरिनै स्तनपान सप्ताहकारुपमा मनाउने चलन छ । यो परिपेक्ष्यमा नेपाली समाज र स्तनपानका फाईदाहरु बारे अझै पनि जानकारी र जागरण पर्याप्त छैन र बढ्दो आधुनिकीकरणको चपेटामा नेपाली समाज यता न उता को पनि नभएको हैन् ।
बर्खायाममा पानीमा भिज्ने अनि फेरि त्यसै कपडामा सुक्ने साथै घाममा मज्जाले कपडा सुक्न नपाई ओश लाग्ने, शेप रहने अनि ढुंडी लाग्ने समस्या हुन्छ । यसरी घामको कमी अनि पानीको ओश धेरै हुँदा बिभिन्न चर्मरोगहरु बिशेषतः लुतो लाग्न सक्ने संभावना हुन्छ ।
डा. दिव्यासिंह शाह - Jul 31 2017
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तोकमा २० वटा डायलाइसिस मेसिन ल्याउने भनिए पनि बल्लबल्ल पाँच वटा मेसिन ल्याउने निर्णय भयो । अस्पतालमा कार्यरत हामी कतिपय डाक्टर अन्य व्यवस्थापनका काममा समेत दौडधूप गर्नुपरिरहेको हुन्छ ।
शरिरमा पानी कम हुँदा देखिने ९ लक्षण
हामीले सधैं सुनिरहेको कुरा हो– हामी पर्याप्त पानी पिइरहेका छैनौं । राम्रैसँग थाहा छ कि हामीले पर्याप्त मात्रामा पानी पिउनुपर्छ, तर पनि अनेक कुरामा अल्झेर हामी पानी पिउनुलाई हाम्रो दैनिकीको प्राथमिकतामा पार्न असफल हुन्छौं । यसको परिणाम हामी आफ्नो शरीरमा विभिन्न परिवर्तन आइरहेको अनुभव गर्न थाल्छौं।
- Jul 18 2017
आँखाको ख्याल राख्नुहोला ५ दैनिक उपायहरु
आँखाको ख्याल राख्न किन जरुरी छ भन्ने कुरा हामीसबैलाई थाहा छ । आँखा छ र त रंग छ, हरियाली छ अनि सुन्दरताको अमुक भाव छ । यसो भन्दैमा हामीले दृष्टिविहीन साथीहरुको सुन्दरताको अनुभुतीलाई कम आँक्न खोजेको भनें हैन तथापी आँखाको ख्याल राख्न जरुरी त हामीसबैले छ नि, हैन र ?
डा. अमृता गिरी - Jul 10 2017
बच्चा जन्माउने योजना बनाउनुअघि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
विवाहित दम्पत्तीले सन्तानको तयारी गर्नुअघि योजना बनाउनुपर्छ । हाम्रो समाजमा गर्भवती भएपछि एकैपटक डाक्टरकोमा जँचाउन जाने चलन छ । तर, सन्तानको योजना बनाउनुअघि नै दम्पतीहरु चिकित्सकको परामर्शमा आउनु राम्रो हो ।
Suyog Dhakal - Jul 05 2017
क्यान्सर हुनबाट बच्न खाने गर्नुहोस्, यी खानेकुराहरु
क्यान्सरको जोखिममा हामी सबैजना छौ, यसबाट बच्न हामीले हाम्रो आहार अनि बिहारमा ध्यान दिन जरुरी छ । बढ्दो रसायनिक कुराहरुको प्रयोग, घट्दो ओजोन तह अनि अस्वस्थ खानपिनका कारणले हामीसबैजना यस रोगको जोखिममा छौ । स्मरण रहोस् गएको दशकमा क्यान्सर रोगका बिरामीहरु संसारभरिनै निकै बढेका छन् ।
Suyog Dhakal - Jun 26 2017
गोरोपनाको घरेलु ३ सरल र अदभुत उपायहरु
पानी नै जीन्दगानी हो, पानी प्रशस्त पिउनुपर्दछ भन्ने हामीसबैलाई थाहा त छ तर पानी पिउनाले हुने स्वास्थ लाई फाईदा गर्ने कुराहरु हामीहरुलाई थाहा नहुन पनि सक्दछ । हाम्रो शरीरको हरेक भागहरुलाई राम्ररी कार्यगर्न र अन्य भागहरुसँग समन्वय गर्न पानी चाहिन्छ ।
उच्च रक्तचाप मानसिक तनावग्रस्त आधुनिक जीवनशैलीको परिणाम हो । अति व्यस्त जीवन, उच्च आकांक्षा, असन्तोष, अत्यधिक कार्यबोझ आदिले रक्तचाप बढाउन मद्दत पुर्याउँछ । आजको युगमा काम नगर्ने, उच्च आकांक्षा नराख्ने व्यक्ति विकासको गतिमा पछाडि पर्छ ।
Suyog Dhakal - May 31 2017
धूम्रपान छाड्ने ५ वटा व्यवहारिक उपायहरु : एकफेर पढ्नैपर्ने
औँलाको कापमा समेत पहेँलो दाग बस्ने गरी धूम्रपान गर्ने देखि दिनमा आधा अनि एउटासम्म मात्र खान्छौ भनेर नाक फुलाउने हामीमध्य धेरै छौ । हामीमध्य धेरैले धूम्रपान छाडेका पनि छैनो होला भने कतिपयले खाएर पनि छाडिसकेका हुन सक्छौ ।
Suyog Dhakal - May 29 2017
महिलाको मासिक रक्तश्रावमा अडेको मानवीय अस्तित्व
महिनावारी लुकाउनुपर्ने र लाजको कुरा हैन, महिनाभरी घरको रानी बनाएर राखेकी छोरीको महिनावारी भएको बेलामा छोएको पानीसम्म नखाने चलन अझै हाम्रो समाजमा छ । आज संसारभरि महिनाबारीका यस्ता धेरै आयाम अनि महिनावारी स्वास्थ्यका कुरा गर्दै रजस्वाला स्वास्थ्य दिवस मनाईदै छ ।
डा. निनादिनी श्रेष्ठ - May 29 2017
अनुहार बेस्सरी दुख्ने यो कस्तो रोग हो?
तपाईंहरु मध्ये कसैले अनुहार वा गालाको एकापट्टिको भागमा करेन्ट लागेजस्तो हुने, झमझमाउने र बेस्सरी दुख्ने गरेको अनुभव गर्नु भएको होला। विशेष गरी यस्तो समस्या ६५ वर्ष कटेका मानिसलाई बढी देखिने गर्छ। यो एक प्रकारको नशा सम्बन्धी रोग हो।
डा. अनुप बाँस्तोला - May 22 2017
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार संसारमा २३ करोड मानिसमा दम रोग छ। दम रोगका कारण बर्सेनी हजारौंले अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने स्थिति छ। विश्वमा दमका कारण हुने जम्मा मृत्युमा असी प्रतिशत नेपाल जस्ता अति कम र विकासोन्मुख देशमा हुने गरेको छ।
Suyog Dhakal - Apr 24 2017
हामीले दैनिक जिवनमा गर्ने ५ गल्तीहरु, स्वास्थ्य विशेष
स्वस्थ्य रहन पाउनु सबैको अधिकार र कर्तब्य दुबै हो , हैन र ? तर यसो हुँदाहुँदै पनि हामीले आफूलाई स्वस्थ्य राख्न सकिरहेका हुँदैनौ । हाम्रो अस्वस्थ्यकर बानी अनि अनभिज्ञताका कारणले हामी अस्वस्थ्य बन्दै गएका कुराहरुको पत्तो हामीलाई नै हुँदैन् ।
मुत्र प्रणाली अन्तर्गत मिर्गौला, पिसाबनली र पिसाब थैलीको पत्थरीको समस्या लिएर पिसाब सम्बन्धी शल्यक्रिया विभागमा आउने बिरामीको संख्या उल्लेख्य छ। यस विभागमा आउने सय जना व्यक्तिमध्ये १५ जनालाई मुत्र प्रणाली सम्बन्धी पत्थरी हुने गरेको पाइएको छ।
हिड्नुका १२ फाइदा
स्वास्थ्यका लागि हिडाईंका धेरै फाइदा छन् । यो एरोबिक अभ्यास हो । टेनेसी विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनमा पनि नहिड्नेभन्दा हिड्नेको शरीरमा बोसो काम भएको पाइएको थियो । हिड्दा शरीरमा रगत जम्न पाउँदैंन र मुटु रोग पनि लाग्न पाउँदैंन । यसका फाइदा के–के छन् ?
डा. अभय यादव - Apr 03 2017
ढाड दुख्नुका धेरै कारण हुन्छन्। ती मध्ये मेरुदण्डको नशा च्याप्पिएर हुने दुखाइ प्रमुख कारणमा पर्छ। ढाड दुख्ने समस्या लिएर उपचारका लागि आउने अधिकांशमा नशा च्याप्पिएर ढाड दुख्ने गरेको पाइन्छ। मेरुदण्डको नशा च्याप्पिएर हुने दुखाइलाई 'न्युरोजेनिक पेन' भनिन्छ।
डा. अर्पणा न्यौपाने - Mar 27 2017
प्रदुषणले गर्छ के, जोगिने कसरी ?
नेपालका विभिन्न सहरको वायु प्रदूषणको स्थिति आँकलन गर्दा खतराको घण्टी बजिसकेको छ । प्रदूषणको असर तत्कालीन र दीर्घकालीन हुन्छ । केही सामान्य स्वास्थ्य समस्या तुरुन्तै देखिए पनि गम्भीर समस्या देखिन समय लाग्छ ।
- Mar 13 2017
पिसाबका बारेमा जान्नै पर्ने कुरा
सरसफाइको कमी, सन्तुलित आहारको कमी, अन्य संक्रमणका कारण कहिलेकाहीँ पिसाब एसिडिकबाट अल्कोलाइन बन्छ । पिसाब अल्कोलाइन हुँदा ब्याक्टेरियाले हुर्कने राम्रो वातावरण पाउँछन् र संक्रमणले तुरुन्तै समातिहाल्छ । यस्तो अवस्थामा पिसाबमा क्रिस्टल बन्ने सम्भावना पनि अत्यधिक रहन्छ । संक्रमणका कारण पिसाब गन्हाउने समेत हुन्छ । चिकित्सकीय भाषामा यस्तो समस्यालाई प्युरिया भनिन्छ । संक्रमणले नाइटोमुनि समेत दुखाउँछ ।
बच्चालाई भातको माड खुवाउँदा फाइदै-फाइदा
भिटामिनको स्रोतः माडमा थियामिन, रिबोफ्लाभिन, नियासिन र भिटामिन बी–६ पाइन्छ। यी भिटामिनले शरीरलाई विभिन्न तरिकाको फाइदा पुर्याउँछ। जस्तै, रिबोफ्लाभिन दृष्टि र छालाका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ। नियासिनले स्नायु र पाचन प्रणालीमा सहयोग गर्छ। भिटामिन बी–६ दिमागको विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ। चामललाई केहीबेर तातो पानीमा पकाउँदा पानीमा सजिलै भिज्ने यी भिटामिन उत्पन्न हुन्छन्। तसर्थ बच्चालाई भिटामिनको कमी छ भने नियमित भातको माड खुवाउनुपर्छ।
Suyog Dhakal - Dec 22 2016
पुस फासफुस भन्ने भनाई हामीलाई धेरै सुनेका छौँ । अब हिँउदका दिनहरु छोटा भए भने रात लामा छन् । चिसो मौसमले हामीलाई धेरै प्रकारले असर गरेका छन्, घाम प्यारा लाग्नथालेका छन् अनि सिरक र सुईटर अनि ज्याकेट भित्र हामी गुडुल्किन थालिसक्यौ, हैन त ?
- Nov 20 2016
- Nov 02 2016
बिचमै व्यायाम छोड्दा शरीरलाई गर्ने असर ?
व्यायाम छाडेको दुई सातापछि सहनशिलता घट्छ । दुई साताको अन्तरालपछि तपाईलाई भ¥याङ उक्लदा वा ओर्लदा स्फूर्ती हराउछ । शरीरलाई आवश्यक पर्ने अक्सिजन (भोलुम अफ अक्सिजन) को मात्रा घट्छ । दुई सातापछि अक्सिजनको मात्रा १० प्रतिशतले घट्ने अध्ययनले देखाएको छ । अमेरिकाकामा खेलसँग सम्बन्धित चिकित्सक फारह हमिदका अनुसार व्यायाम छाडेको चार सातापछि दिमागमा अक्सिजको मात्रा १५ प्रतिशतले घट्छ । तीन महिनासम्म व्यायाम नगर्दा २० प्रतिशतले अक्सिजनको मात्रा घट्छ ।
- Oct 22 2016
अव त दशै पनि संघारमा आइसक्यो, हुन त मासु खान दशैँनै कुर्नपर्ने त छैन तथापि दशैँको मासु, तिन्का परिकार अनि फुर्सतको रमाइलोनै वेग्लै छ । कति किलो मासु ल्याउने या खसीनै काट्ने या थप अरु के के गर्ने, योजनाहरु वन्दैछन पनि होला ।
पोलियोको निःशुल्क थोपा, एचआईभीका लागि निःशुल्क एआरभी औषधीहरु, कुष्टरोग र क्षयरोगका निःशुल्क औषधी पाइने हाम्रो देशका सम्पूर्ण स्वास्थ्य चौकीमा डाइबेटिजको औषधीहरु त परै जाओस पर्याप्त जानकारीसम्म दिन पनि प्राथमिकतामा परेको देखिंदैन । यका कारणहरु धेरै छन्, हुन सक्छ डाइबेटिज एउटा यस्तो वहुबिधात्मक र जटिल रोग हो कि यसलाई सहज व्याख्या र निरोधात्मक सुझाव दिन स्वास्थ्यसेवीहरुलाई सक्षम बनाउन सकिएको छैन् या डाइबेटिजलाई पनि संवेदनशील रुपमा हेरिइएको छैन् ।
शरीर स्वस्थ राख्न मुटु स्वस्थ हुनु जरुरी हुन्छ । तर, आजकाल अनियमित खानपान र अस्वस्थ दिनचर्याका कारण उच्च वा न्युन रक्तचापको समस्या दिनहुँ बढ्दो छ । शरीरमा रक्तप्रवाह सामान्यभन्दा कम हुन्छ भने त्यसलाई न्युन रक्तचाप भनिन्छ । सामान्यतः ब्लडप्रेसर १२०÷८० हुन्छ । ९० भन्दा कम हुनुलाई लो ब्लडप्रेसर भनिन्छ । यसलाई गम्भीर रुपले नलिइ यसको असर शरीरको अर्को अंगमा पनि पर्न सक्छ । शरीरमा ब्लडको दबाब कम...
किन चढ्छ शरिरमा देवी ?
२५ वर्षीया सीताको विवाह भएको १ वर्ष भयो । ६ महिनाअघि साउदी अरबमा काम गर्न गएका श्रीमानसंग चिठी आदानप्रदान भइरहन्छ । घरमा नन्द, देवर, सासू, ससुरासँगै बस्छिन् । घरमा रहँदा कति कुराको जवाफ सासु, ससुरालाई फर्काउन उनलाई गाह्रो छ । एकमहिना अघि घरमै रहेका बेला उनमा अचानक नौलो समस्या देखियो । एक्कासी काम्न थालिन् र भन्न थालिन्, ‘हेर.. हेर… म देवी हुँ, तँलाई मार्छु, तँलाई खान्छु तेरो सन्तानलाई नाश गर्छु’...
पाइल्समा यसकारण आउछ रगत: डा. राजेन्द्र रेग्मी
तपाईं हामीले सुनेको अनि कतिले वर्षौदेखि भोग्दै आएको समस्या हो, पाइल्स । यसलाई चिकित्सकीय भाषामा ‘हेमोरोइड’ भनिन्छ । यो प्राइमरी र सेकेन्डरी गरी २ प्रकारको हुन्छ । यसको मुख्य कारण नै कब्जियत हो । मानिसको दिसा गर्ने ठाउँ वरिपरि रहेका रक्तनशा विविध कारणबाट सुन्निने अवस्थालाई ‘हेमोरोइड’ भनिन्छ । साधारणतया ती रक्तनशाले दिसा गर्ने प्रक्रियालाई सघाउ पुर्याइरहेका...
तौल घटाउने केही २० वैज्ञानिक उपाय
-स्वास्थ्य खबरपत्रिका धेरै ब्रेकफास्ट खानुहोस्ः आफ्नो दिनको सुरुवात एक सन्तुलित ब्रेकफास्टबाट गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ स्वास्थ्य क्षेत्रमा बारम्बार सुन्न पाइन्छ । बेलायतस्थित इम्पेरिकल कलेज लन्डनले गरेको अध्ययनअनुसार बिहानको ब्रेकफास्ट छाड्ने मानिसको दिमाग उच्च क्यालोरियुक्त खानेकुरातर्फ देखाउँदा बढी उज्यालो देखिएको थियो । यसको अर्थ हो, तपाईंले ब्रेकफास्ट छाडेको दिन तपाईको स्वास्थ्यका लागि हानिकारक लाग्ने स्न्याक्सप्रति बढ्दो आशक्ति...
बिहान खाली पेटमा दूध चिया पिउदा हुनसक्ने नोक्सानि
चिया धेरै नेपालीले पिउने पेय पदार्थमा पर्छ । बिहान ओछ्यानमै चिया पिउने त नेपालीको चलन नै बनेको छ । कतिपय त चिया नपिई नित्यकर्म गर्न सक्दैनन् । अधिकांश नेपालीले बिहान चिया पिउछन् । के बिहान खाली पेटमा चिया पिउनु राम्रो...
स्वस्थ बन्न खाने तरिका
नून थपेर खाने बानी छोड्नुपर्छ । बिहान–बेलुकीको खानामा हरियो सागले फाइदा गर्छ । दैनिक कम्तीमा एकपल्ट फलफूल खानुपर्छ ।
कब्जियत रोक्ने ८ घरेलु उपाय
कब्जियत साझा स्वास्थ्य समस्या हो । यसले पेटमा गम्भीर गडबडी भएको संकेत गर्छ । सबै उमेरका मानिसमा देखिने यो रोगबाट विशेषगरी वृद्धवृद्धा पीडित छन् । कतिपय कब्जियतपीडित चिकित्सकको औषधि खाइरहेका छन् भने कतिपय घरेलु उपचारमै निर्भर छन् । विज्ञहरुका अनुसार कब्जियतका लागि घरेलु उपचार अन्य औषधिभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ । कब्जियतबाट मुक्त हुने आठ तरिका: